(1953-06-13) ၁၃ ဇွန်၊ ၁၉၅၃
ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ နေ့ရက်က မွေးဖွားခဲ့သည်။ အ.ထ.က(၂)စမ်းချောင်းမှ ၁ဝ တန်း အောင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် မှ B.Com. (I.T.) ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် Burma Council of Account မှ စာရင်းကိုင် ဒီပလိုမာ ရခဲ့သည်။
ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက် ၁၉၈၉ တွင် Alliance Francaise မှ ပြင်သစ်ဘာသာ ဒီပလိုမာ (Diplome de Langue Francaise) ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် ရှိ University of Southern California က ပို့ချသော မီဒီယာ ခေါင်းဆောင်သင်တန်းကို (Media Leadership Training Program, specialization in Social Content Media Production Course) တက်ရောက် လေ့လာခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
မင်းသား ညွန့်ဝင်း၊ မင်းသမီးများအဖြစ် ဝါဝါဝင်းရွှေ၊ မေဝင်းမောင် တို့နှင့် တွဲဖက် သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးခဲ့သော မိန်းကလေးရှင်ရဲ့ဆန္ဒ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် ၁၉၇၇ ခုနှစ် အတွက် အကယ်ဒမီဆု (အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့) ကို ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်က ရရှိခဲ့သည်။
ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်သည် အောင်မြင်နေချိန်တွင် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သော စိန်မြင့် နှင့် ခိုးရာ လိုက်ပြေးခဲ့သည့်အတွက် ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကာလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော သတင်းစာများ၏ မျက်နှာဖုံးတွင် "ကိုကို့ကို ကျမက ခိုးတာပါ" ဟူသော ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ကျော်ကြားခဲ့သည်။